Wave Money Apk Download Ho an'ny Android [Fampiasam-bola] - Luso Gamer
Wave Money Apk Download ho an'ny Android [Fampiharana ara-bola]
Ity dia fampiharana android azo antoka vaovao narafitra ho an'ny vahoakan'i Myanmar. Eny, tsy miresaka momba ny Wave Money Apk hafa izahay. Raha ny marina, ny fampiharana dia manolotra ity rafitra famatsiam-bola an-tserasera mandroso ity. Izay tsy voatery hitsidika birao mihitsy ny mpikambana voasoratra anarana.
Tamin'ny andro taloha, ny olona dia tia mitsidika birao ao anatin'izany ny banky amin'ny fifanakalozana ara-bola. Satria nanana fotoana malalaka hitsidihana birao na banky ny olona. Niova tanteraka anefa ny fotoana sy ny toe-javatra ankehitriny. Amin’izao vanim-potoana iainantsika izao dia sahirana loatra amin’ny asa fanao andavanandro ny olona.
Tsy afaka mandany fotoana amin'ny fitsidihana banky sy andrim-bola samihafa izy ireo. Na ny olona aza mitaky an-tserasera Wallet nomerika rafitra izay hahatanteraka araka ny tokony ho izy ny protocols fiarovana ary manamora ny fifampiraharahana amin'ny Internet. Noho izany ny fitakiana mifantoka dia nitondra Wave Money App.
Inona ny Wave Money Apk
Wave Money Apk dia fampiharana ara-bola Android novolavolain'ny Wave Money. Ny antony nananganana ity fampiharana vaovao ity dia ny hanomezana rafitra azo antoka amin'ny fifanakalozana amin'ny Internet. Aiza ny mpikambana voasoratra anarana afaka mandefa sy mandray vola.
Hatramin'izao, mpiasa 57 arivo miampy no efa nanoro ny fangatahana. Ny famakiana ny tarehimarika marina dia hanampy amin'ny fahatakarana ny lazan'ny fampiharana. Amin'izao fotoana izao, ny olona manerana izao tontolo izao dia mijaly noho ny olan'ny areti-mifindra.
Na ny olona any Myanmar aza dia nijaly mafy tamin'io aretina io. Na dia nahomby aza ny mpahay siansa tamin'ny fanomezana Anti-Dot ho an'izao tontolo izao. Na izany aza, ny manam-pahaizana dia manoro hevitra ny olona tsy hitsidika an-tsokosoko any ivelany noho ny loza mety hisaraka amin'ny aretina.
Ny toerana marefo indrindra ho an'ny olona dia ny banky sy ny sehatra ara-bola. Satria ny tahan'ny fifandraisana ara-batana amin'ny toerana toy izany dia ambony noho ny nantenaina. Noho izany, raha jerena ny filana sy ny fepetra takian'ny olona, ​​dia niverina niaraka tamin'ny Wave Pay Apk ny mpamorona.
anarana Wave Money
Anaran'ny fonosana mm.com.wavemoney.wavepay
Ny fampidirana ny fampiharana ao anatin'ny finday android dia tsy hanampy amin'ny fandefasana sy fandraisana vola fotsiny. Saingy manampy ireo mpampiasa finday amin'ny fandoavana faktiora marobe ao anatin'izany ny saram-pandraharahana an-tserasera. Tadiavo fotsiny ilay sehatra manokana ary aloavy amin'ny Internet ny vola takiana.
Ho an'ity dingana ity dia tsy voatery hitsidika birao na sampana mihitsy ny mpampiasa. Misy hevitra mihodinkodina amin'ny anaran'ny 1W1D. Midika izany fa poketra iray fitaovana iray. Noho ny fametrahana ity politika ity dia nihatsara kokoa ny rafitra fiarovana.
Ankoatra izany, misy ambaratonga samihafa ny kaonty azo tratrarina. Mety hahita kaonty misy marika faha-2 ny olona. Ny haavony dia manondro ny fetran'ny serivisy ary ny protocols fiarovana dia mihamatanjaka kokoa. Ny kaonty Level 1 ihany koa dia mitazona encryption fiarovana matanjaka saingy voafetra ny fetran'ny fifanakalozana.
Avy amin'ny isa iray, ny kaonty ambaratonga 1 dia tsy avela hivezivezy lavitra. Ireo izay mino fa ny fifampiraharahany isan'andro dia lehibe kokoa ary mihoatra ny fetra. Avy eo dia angatahana ireo mpampiasa ireo hanavao ny haavon'ny kaontiny manomboka amin'ny ambaratonga voalohany ka hatramin'ny ambaratonga faha-1.
Famindrana vola, vola mivoaka, Air Time Top Up, Manaova fampindramam-bola, Assurance Bills, Broad Band Payments, Health Payments and Online Shopping dia azo atao ihany koa miaraka amin'ny fampiharana. Noho izany dia tia ny endri-javatra pro ianao ary vonona ny hanararaotra ny fotoana ary apetraho ny Wave Money Download.
Ny fametrahana ny Apk dia hanolotra rafitra fifanakalozana an-tserasera.
Amin'ny alalan'ireo mpampiasa android dia afaka mandefa sy mandray vola mora foana.
Misy ihany koa ny fandoavana faktiora an-tserasera.
Ny interface interface dia tsotra sy manintona.
Ilaina ny laharana finday amin'ny fifampiraharahana.
Ahoana ny fametrahana Wave Money Apk
Raha tokony hitsambikina mivantana mankany amin'ny fametrahana sy ny fampiasana ny fampiharana. Ny dingana voalohany dia ny fampidinana ary ho an'ny mpampiasa Android dia afaka matoky ny tranokalanay. Satria eto amin'ny tranokalanay ihany no atolotray ny rakitra Apk tena izy sy tany am-boalohany.
Mba hahazoana antoka fa ny mpampiasa dia hifalifaly amin'ny vokatra mety. Nanakarama ekipa manam-pahaizana ahitana matihanina samihafa izahay. Raha tsy hoe azo antoka ny fampandehanana ny rakitra Apk ny ekipa. Tsy manolotra ny Wave Money Android ao anaty fizarana fampidinana mihitsy izahay.
Ny rakitra fampiharana omentsika eto ho an'ny mpampiasa android dia tany am-boalohany. Na dia azontsika atao aza ny manome toky ny mpampiasa fa ny rakitra Apk dia azo antoka tsara hapetraka sy hampiasaina. Tsarovy fa tsy antsika velively ny zon'ny mpamorona. Midika izany fa raha misy tsy mety dia mifandraisa amin'ny ekipa mpanohana ofisialy.
Betsaka ny rindranasa Android mifandraika amin'ny vola azo tratrarina eto. Raha te hankafy ireo fampiharana hafa tsara indrindra dia tsindrio ny rohy omena etsy ambany. Ireo dia Barwaqt App ary NeoBank Apk.
Noho izany dia tena matotra ianao amin'ny fifanakalozana an-tserasera. Ary manana ahiahy foana momba ny fiarovana ny mpampiasa sy ny protocol fiarovana. Noho izany dia mitady ny rakitra fampiharana ara-bola tsara indrindra ianao. Avy eo dia manoro hevitra anao izahay misintona sy mametraka Wave Money Apk.
Sokajy Finance, Apps Tags Wallet nomerika, Wave Money Apk, Wave Money App, Wave Money Download, Wave Pay Apk Post Fikarohana
Neko TV Apk Download Ho an'ny Android [IPTV]